खेलकुद Archives - Page 29 of 35 - Dna Nepal
प्रमुख समाचार : पोखरा महोत्सवमा आइतबार कमला घिमिरे र प्रिन्स लम्सालको लाइभ दोहोरी हुने
पोखरामा अन्तराष्ट्रिय प्याराग्लाईडिङ प्रतियोगिता, २२ देश सहभागी हुने १९ माघ २०७४, शुक्रबार १४:२२
पोखरा, माघ १९ । प्याराग्लाइडिङको विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य मानिने पोखराको सराङकोटमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन लागेको छ । आइतबारदेखि सराङकोटमा एसिएन कन्टिनेन्टल प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगितामा भाग लिन विश्वका विभिन्न देशबाट..
विराट कोहलीको शतकमा भारतको सानदार जित
डर्विन, माघ १९ । कप्तान विराट कोहलीले शतक प्रहार गरेपछि दक्षिण अफ्रिका विरुद्धको पहिलो एकदिवसीय खेलमा भारतले सानदार जित हात पारेको छ । बिहीबार डर्विनमा भएको खेलमा भारतले दक्षिण अफ्रिकालाई ६ विकेटले पराजित गरेको हो । दक्षिण अफ्रिकाले दिएको २ सय..
पुलिस क्लब आहा रारा गोल्डकपको फाईनलमा १८ माघ २०७४, बिहीबार १२:५९
धन बस्नेत पोखरा, माघ १८ । नेपाल पुलिस क्लब आहा रारा गोल्डकप उपाधिको लागि रुस्लान थ्री स्टारसित भिड्ने पक्का गर्दा इतिहास कोर्ने सपना पुर्वेली टोली धरान फुटबल क्लबको सेमिफाईनलबाट टुंगिएको छ । पेनाल्टी गोल मार्फत पुलिसले १—० ले जित्दै फाईनल..
पाहुना टोलीमाथी थ्रि स्टारले गर्यो गोलको बर्षा १७ माघ २०७४, बुधबार १२:३३
पोखरा, माघ १७ । पाहुना टोली बंगलादेशको उत्तर बारिधारा फुटवल क्लवमाथी थ्रिस्टार क्लवले फराकीलो जीत निकालेको छ । बुधबार पोखरा रंगशालामा भएको प्रतियोगितामा थ्रिस्टारले पाहुना टोलीलाई ५–० गोलअन्तरले हरायो । जीतसँगै थ्रिस्टारले आहा रारा..
पुलिससँग मनाङ स्तब्ध १६ माघ २०७४, मंगलवार ११:५४
पोखरा, माघ १६ । मनाङ मस्र्याङदीलाई पाखा लगाउँदै विभागीय टीम नेपाल पुलिस क्लव पोखरामा जारी १६ औं संस्करणको आहा रारा गोल्डकपको सेमिफाईनल प्रबेश गरेको छ । मंगलबार भएको अन्तिम क्वाटर फाईनल खेलमा पुलिसले मनाङलाई ३–१ गोलअन्तरले पराजीत गर्यो ।..
आर्मी टाइब्रेकरको शिकार, धरान सेमिफाईनलमा १४ माघ २०७४, आईतवार १३:४०
धन बस्नेत पोखरा, माघ १४ । नेपाल आर्मी टाइब्रकेरको शिकार हुदैं आहा रारा गोल्डकप उचाल्ने सपना तुहिँदा पूर्वेली टोली धरान गोल्डकपको सेमिफाईनलमा पुगेको छ । पोखराको मैदानमा दुई वर्ष अघिको नतिजालाई दोहो¥याउँदै धरान फुटबल क्लबले सेमिफाईनल तय गर्दा..
२ खेलाडी गुमाउदै पाहुना टोली आहा रारा गोल्डकपको सेमिफाईनलमा १३ माघ २०७४, शनिबार १४:२९
धन बस्नेत पोखरा, माघ १३ । उत्तर बरिन्धरा क्लब बंगलादेश आहा रारा गोल्डकपको सेमिफाईनलमा प्रवेश गर्दा आफना दुई अफ्रिकन खेलाडीलाई गुमाएको छ । सुदुर पश्चिम ११ स्पोर्टिङ क्लबको चुनौतिलाई २—१ ले पन्छाउँदा अन्तिम पाँच मिनेटभित्र आफना दुई खेलाडी रातो..
आदित्य चम्किएपछि संकटालाई संकट ! ११ माघ २०७४, बिहीबार १२:०१
पोखरा, माघ ११ । पोखरामा जारी १६ औं आहा रारा गोल्डकप अन्तर्गत विहिबारको खेलमा बिभागीय टीम एपिएफ क्लव बिजयी भएको छ । संकटा क्लवलाई १–० गोल अन्तरले पाखा लगाउँदै एपिएफ क्वाटर फाईनल प्रबेश गरेको हो । एपिएफको जीतमा आदित्य चौधरी निर्णायक भए । २८ औं..
आहा रारा गोल्डकप–सुदुरपश्चिमले लियो आयोजकसँग बदला ९ माघ २०७४, मंगलवार १२:०९
प्रकाश ढकाल पोखरा, माघ ९ । आयोजक सहारा क्लव पोखरालाई ३–० गोलअन्तरले पराजीत गरी सुदुरपश्चिम ११ ले अघिल्लो प्रतियोगिताको बदला लिएको छ । अघिल्लो संस्करणमा सुदुरपश्चिम सहारा क्लवसँग ४–० को फराकिलो अन्तरले पराजीत भएपछि उद्घाटन खेलबाटै बाहिरिएको..
आहा रारा गोल्डकप आजदेखि, सहारा र सुदुरपश्चिमबीच उद्घाटन खेल
पोखरा, माघ ९ । मोफसलको प्रतिष्ठित पोखराको आहा ! रारा गोल्डकप फुटवल प्रतियोगिता आजदेखि सुरु हुँदैछ । सहारा क्लवको आयोजनामा पोखरा रंगशालामा दिउँसो साढे १ बजे प्रतियोगिताको उद्घाट हुनेछ । प्रतियोगिता माघ २० गतेसम्म चल्नेछ । प्रतियोगिताको पोखरा..
पोखरा १२ माघ । पोखरा महोत्सवको अन्तिम दिन आइतबार पछिल्लो समय दोहोरी गायर भाइरल बनेकी कमला घिमिरे र प्रिन्सि लम्सालको प्रस्तुती रहने भएको छ । महोत्सवमा आउने दर्शकले दोहोरीबाट भाइरल बनेकी कमला घिमिरे र.....
पोखरा १० माघ । पोखरा महोत्सवमा आयोजित विद्यालय स्तरिय लोकनृत्य प्रतियोगिताको उपाधी सूर्योदय बोर्डिङ स्कुलले.....